What happen at MZ? — MYSTERY ZILLION
What happen at MZ?
အခုတလောပိုင်း MZ ကို ၀င်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ နှစ်ခါလောက်ရှိပြီဗျ။ နှစ်ခါလုံး နေ့လည်ပိုင်းပဲ။ အကြာကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခဏလေးပါပဲ။ ပြီးတော့ MZ ကို member တွေသာမက guest တွေလည်းလာတဲ့သူ များလာပြီနော်။ အဲဒါကြောင့် Sever က အလုပ်များတယ်ထင်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဗျ။ သိချင်လို့ ဒီဟာလေး တင်လိုက်တာပါခင်ဗျာ။
ပြီးတော့ MZကို အလှူငွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲဟင်.....။ မင်မင်တို့ပြောကြပါဦး။
နောက်ပြီးတော့ 25 ရက်နေ့ပွဲအကြောင်းလေးလည်း အသေးစိတ်ပြောစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျနော်ကတော့ ၀င်လို့ရတယ် ကိုမောင်ပြုံး ရဲ.။
Server Busy တော့ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ် ... တခြား ဘာအကြောင်းရှိမလဲတော့ ကျနော်လဲမသိဘူး ... :39:
သြော် ... ကြုံတုန်း ကြော်ငြာ၀င်ဦးမယ် ...
Alexander လဲ မြေနီကုန်းမှာနေတာဗျ။ Fatima Church နားလေးမှာပေါ့ ...
မနက်ဖန်၊သဘက်ခါ၊ဖိန်းနွဲခါ ( 19,20,21 Dec. 08 ) သုံးရက် Home ကိုပြန်မှာ ...
Saturday 11:00am Dagon Centre, Amore Cafe' မှာရှိနေမှာ ..... အားရင်လာခဲ့နော် .... ( ကျနော်က အပြင်မှာ ၀ိုင်၀ိုင်းနဲ့တူတယ်ဗျ ... :P )
မော်ကျွန်းက MZ member PawPaw နဲ့ ပါမိတ်ဆက်ပေးမယ် .......
( MZ က ကောင်မလေးတွေလဲလာခဲ့နော် ... ကျနော်တို့ ၂ ယောက်လုံးက လူချောလေးတွေဗျ ... :P:P:P )
Alexander လဲ အလှုငွေ ထည့်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ ... ပြောပြကြပါဦး ...... Saturday ကျရင် DC, Amore' Cafe' မှာ လာ ဓါးပြ တိုက်နော် ...
အလှူငွေထည့်ချင်ပါက ကိုစေတန်ကို pm ပို့ကြည့်ပါ့လား လမ်းမတော်ဖက် ရောက်ရင်လည်းဝင်ခဲ့ကြပါဗျို့
Saturday 11:00am dagon centre, amore cafe' မှာရှိနေမှာ ..... အားရင်လာခဲ့နော် .... ( ကျနော်က အပြင်မှာ ၀ိုင်၀ိုင်းနဲ့တူတယ်ဗျ ... )
( mz က ကောင်မလေးတွေလဲလာခဲ့နော် ... ကျနော်တို့ ၂ ယောက်လုံးက လူချောလေးတွေဗျ ... :p:p )
alexander လဲ အလှုငွေ ထည့်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ ... ပြောပြကြပါဦး ...... Saturday ကျရင် dc, amore' cafe' မှာ လာ ဓါးပြ တိုက်နော် ... :d
ဟယ် အိမ်နီးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လဲ စမ်းချောင်းမှာဘဲနေတယ်။ ကျွန်းတောလမ်း နဲ့ ချမ်းသာလမ်းထောင့်မှာ နေတယ်ဗျ။
ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့ မျက်မှန်းတန်းသိလောက်ကြပါတယ် ... ( အသက်တူရင်ပေါ့ ) ... ကျနော်က 28. Name က Henry ( real name ပါ ) :6:
နေတာကမြေနီကုန်းမှာဆိုပေမဲ့ ... Bro တို့နားမှာပဲ ကျနော်ကျင်လည်တာဗျ။ NetMaster မှာ Internet အမြဲသုံးတယ် ... Planet Tea Shop မှာ Tea သောက်တယ် ... Green Ice ကို GF နဲ့လစ်တယ် ... ဓမ္မာရုံရှေ့မှာ Guitar တီးတယ် ... ,.... , .............. , ................................ ညနေဆို အဲမှာပဲ အမြဲ ... အခုလဲ ဒီတိုင်းပဲ (ရန်ကုန်ပြန်ရောက်သွားရင်) ........ အဲနားကလူတွေ အကုန်လုံး fri တွေချည်းပဲ ....
ဘာလုပ်မလို ့လဲဟင်.....မုန် ့ကျွေးမလို ့လား
ကဲကဲ အားလုံးလူဆုံကြပြီလား။ ဆုံပြီဆို ဒိုင်နာလွှတ်လိုက်တော့မယ်။ လိပ်စာတွေလဲ သိကုန်ကြပြီ။:d
ကို Alexender က မထင်ရဘူးနော် အရမ်းနုတာပဲ။ avatar မှာတင်ထားတာ အကို့ပုံ မဟုတ်ဘူးလား။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင် ဝိုင်ဝိုင်းထက် အများကြီးသာတာပေါ့။ ကျနော်ဆို ဂျွန်စောနဲ့ တူနေလို့စိတ်ညစ်နေတာ:71:
ဟယ် ဝမ်းသာလိုက်တာ။ ကျွန်တော်လဲ gi ကို အိမ်က မိန်းမနဲ့ သွားစားဖူးတယ်။ :d ပြီးတော့ ရွက်သစ်မှာ လက်ဖက်ရည်သောက်တယ်။ ဘေးနားက အကြော်ဆိုင်မှာ မနက်တိုုင်း အကြော်ဝယ်တယ်။ နောက် မြောင်းမြလမ်းထိပ်မှာ ပဲပြုတ်ဝယ်တယ် မနက်တိုင်း။ :67:
အသက်တော့ မတူဘူးဗျာ (တောက်) အဲဒါတစ်ခုဘဲ ...။
အိုင်းစတိုင်းလိပ်စာ သိအောင်စောင့်ဦးမယ်တဲ့။ အဓိကလူက အိုင်စတိုင်းဆိုဘဲဗျ။
ကဲကဲ တော်ကြစို့ တော့ပစ်လွဲချော်သွားပြီ။
ဟုတ်ပါတယ်... ဒီရက်ပိုင်း အနော်လဲဖြစ်ပါတယ်... အောက်က link လေးကို မှတ်ထားလိုက်ပါ။
ဒါကလဲ log in ၀င်၀င်ချင်း တွေ့ ရပါတယ်။
MZကို အလှူငွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲဟင်.....။ မင်မင်တို့ပြောကြပါဦး။
mgpyone က ရန်ကုန်ကဆိုတော့ Admin တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့လွယ်ပါတယ်......
25 ရက်နေ့ပွဲအကြောင်းလေးလည်း အသေးစိတ်ပြောစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုGipsy ကို PM နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်မေးကြည့်ပါလား.... သူ၀င်ပြိုင်မယ်ထင်တယ်။
ကွန်နက်ရှင်းကကို မကောင်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက် စေတန်တို့ ဆာဗာကို မော်နီတာ လုပ်နေပါတယ်။ မထိခိုက်လောက်သေးပါဘူး။ ထိခိုက်လို့ လိုအပ်မှ အရင်လို အကူအညီတောင်းပါ့မယ်။ ခုလို ကူညီချင်တာ ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျ။ လိုအပ်ရငိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ့မယ် မင်ဘာများ ခင်ဗျား။
အတော်ပဲ စနေနေ ဒဂုံစင်တာမှာ shopping ထွက်မလို့လုပ်နေတာ ။ဒကာတွေ့ပြီ:D:D:D
အဲ .... Dating တွေလုပ်နေပါတယ်ဗျာတို့ ... :71::71::71:
ကိုဒီဘီအေကြီးစိတ်မကောင်း ဖြစ်နေပြီလား။ စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ စလုံးကိုခေါ်ပြီး ပင်နီဆူလာမှာ shopping ပေးထွက်လိုက်လေ။ အခု လေယာဉ်ခတွေစျေးကျနေပြီ စိတ်ကူးမလွဲနဲ့နော်။:D
ဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ လေယာဉ်ခတွေဈေးကျနေရင် မောင်အိုင်းစတိုင်း အလည်လာခဲ့ပါလား။ တွေ့ရတာပေါ့။
25 ရက်နေ့ကျရင် ဘယ်သူတွေလာကြမှာလဲ မသိဘူးနော်။ လာမှာမို့လို့ပါ။ တွေ့ရင်နှုတ်ဆက်ရအောင်လေ။:67:
ဟုတ်ကဲ့ 25 ရက်နေ့က ကိုဇော်စီစဉ်တာပါ။ သူတစ်ဦးတည်းပါပဲ။ အမ်ဇက်အနေနဲ့တော့ အမ်ဇက်ကိုမပြတော့ပါဘူး။ အမ််အီး နဲ့ edu မှီရင်ပြမှာပါ။ ကိုစေတန်တို့နဲ့စကားပြောနေတုန်းပါ။ ပွဲမှာတော့ ကျွန်တော်အလုပ်နားပြီးရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ဗျ တခြားလူတွေတော့မသိဘူး အမ်ဇက်မင်မင်တို့မော်မော်တို့တော့(နိုင်ငံခြားရောက်လူများမပါ) လာပါလိမ့်မယ် ဘယ်အချိန်လည်းတော့မသိသေးပါဘူး အနီးကပ်မှတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါ့မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဝင်ပြိုင်ပါလိမ့်မယ် ရောက်သည့်လူများ ကျွန်တော်ကိုတော့မဲလေးသနားသွားပါနော်